သမ္မတ သက်တမ်း တစ်နှစ် ပြည့် ပွဲ ကို အကြမ်းဖက် သမား တွေ ကို မောင်းထုတ် နိုင်ခဲ့ တဲ့ မာရာဝီ မြို မှာ ကျင်းပမယ် | The FNG
June 29, 2017 · by 21 South News	· in News.	·
သူကိုယ်တိုင် လည်း မာဇင်း မှာ မွေးဖွား ခဲ့ တဲ့ မင်ဒါနာအိုရန်း တစ်ယောက်
ဖြစ် ပြီး အသက် ၇၂ နှစ် အရွယ် ရှိ တဲ့ ရော်ဒီဂို ဒူတာတေး ဟာ IS နဲ့အဘူဆေယက်(ဖ) အဖွဲ့တွေ ကို မာရာဝီ မြို့နဲ့မင်ဒါ နာ အို ကျွန်းမှာ အခြေစိုက် တာ ကို မေလ ၂၂ ရက်နေ့ကတည်း က အလုံး အရင်း နဲ့တိုက်ခိုက်
နေခဲ့ တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုတော့ မာရာဝီ တစ်မြို့ လုံး နီး ပါး ကို ထိမ်းချုပ် နိုင်ခဲ့ ပြီ ဖြစ် ပြီး မင်ဒါနာအို ကျွန်း က နေ လည်း IS တွေ ကို တိုက်ထုတ် နိုင် တော့ မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Soldiers unload crates of Chinese-made assault and sniper rifles as well as more than six million ammunition from two People’s Liberation Army transport planes at Clark Airbase in northern Philippines. (AP Photo/Bullit Marquez) Read more at http://www.channelnewsasia.com/news/asiapacific/china-donates-weapons-to-philippines-in-battle-against-terrorism-8986144
ဒူတာတေး ရဲ့အကြမ်းဖက် သမား ချေ မှုန်း ရေး စစ်ပွဲ ကို အမေရိကန် က လည်း ကူညီ သလို တရုတ် က လည်း ဒေါ်လာ ရှစ်သန်း ဖိုး ရှိ စစ်လက် နက် ပစ္စည်း တွေ ကူညီ ခဲ့ ပါတယ်။
ဖိလစ်ပိုင် ရဲ့မင်ဒါနာ အို စစ်ဆင်ရေး မှာ အကြမ်းဖက် သမား ၃၀၀ ကျော် ကို ချေ မှုန်း နိုင် ခဲ့ ပြီး အရပ်သား ၁၀၀ နီးပါး လောက် သေဆုံး ခဲ့ ပါတယ်။
ဒူတာတေး က မော်တီ အုပ်စု မာရ၀ီ မြို့ကို သိမ်းထား တာ လက်လွှတ် ဆုံးရှုံး ခဲ့ ပြီ လို့ပြော ပြီး IS ဖိလစ်ပိုင် ခေါင်းဆောင် Isnilon Hapilon ကို လက်ရ ဖမ်းမိထား တယ်လို့လဲ မနီလာ က လာတဲ့ သတင်း တွေ မှာ ဆိုပါတယ်။
Tags: Abu Sayaf, Duterte, ISIS, Mandanao, Marawi, Philipine
← ဗင်နီးဇွဲလား တရား ရုံး ပေါ် ဟယ်လီကော်ပတာ နဲ့လက်ပစ်ဗုံး ကြဲချ
သမ္မတ ဖြစ်နိုင် ချေ များ နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် →